एकै घरका दिदि-बहिनीले सम लिंगी बिहे गरेको १२ घण्टामा लगाए पा’ सो (भिडियो सहित) – Ap Nepal
एकै घरका दिदि-बहिनीले सम लिंगी बिहे गरेको १२ घण्टामा लगाए पा’ सो (भिडियो सहित)
घाँस काट्न गएकी दुई युवती झु’ण्डि’एको अवस्थामा मृ’ त फे’ला परेका छन् । सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–६ बाबियाचौरमा बस्दै आएका १४ र १५ वर्षीय दिदी–बहिनी झु’ण्डि’एको अवस्थामा शुक्रबार मृ’त फे’ला परेकी हुन् ।
झु’ण्डि’एको अवस्थामा स्थानीयले शुक्रबार उनीहरूको शव देखेका थिए । १४ वर्षीया किशोरी कक्षा ७ मा र १५ वर्षीया कक्षा ८ मा पढ्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । उनीहरू दुवै जना कमला बादीका दिदीका छोरीहरू हुन् । दुवैले कमला बादीकै घरमा बसेर अध्ययन गर्दै आएका थिए ।
घाँस काट्न गएकी दुई युवती झु’ण्डि’एको अवस्थामा मृ’ त फे’ला परेका छन् । सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिका–६ बाबियाचौरमा बस्दै आएका १४ र १५ वर्षीय दिदी–बहिनी झुण्डिएको अवस्थामा शुक्रबार मृ’त फे’ला परेकी हुन् ।
झु’ण्डिएको अवस्थामा स्थानीयले शुक्रबार उनीहरूको शव देखेका थिए । १४ वर्षीया किशोरी कक्षा ७ मा र १५ वर्षीया कक्षा ८ मा पढ्दै आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ । उनीहरू दुवै जना कमला बादीका दिदीका छोरीहरू हुन् । दुवैले कमला बादीकै घरमा बसेर अध्ययन गर्दै आएका थिए ।
थप तलको भिडियोमा हेर्नुस
Prevनेपाल पैसा पठाउदै हुनुन्छ ? आज ह्वात्तै बढ्यो डलर सहित यी बिदेशी मुद्राको भाउ..
Nextबालबालिकालाई लोकल कुखुराको अण्डा कि बटा, ईको अण्डा ख्वाउदा राम्रो ? हेर्नुहोस्..